NgoMeyi ka-2016, umkami wadlulisela kimi ivangeli lombuso kaNkulunkulu uSomandla. Ngokufunda izwi likaNkulunkulu uSomandla, ngathola ukwazi uhlelo lukaNkulunkulu lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha ukuze asindise isintu, futhi ngathola nokuqonda ukuthi uNkulunkulu uSomandla unguJehova uNkulunkulu owahola ama-Israyeli aphuma eGibhithe, ukuthi futhi uyiNkosi uJesu owahlenga isintu ngokubethelwa esiphambanweni, nokuthi manje ubuyile esenyameni ukuveza iqiniso futhi enze umsebenzi wokwahlulela, ukuhlanza nokusindisa umuntu.... Kungekudala, nami ngaqala ukuhlanganyela empilweni yeBandla LikaNkulunkulu USomandla futhi lapho ngahlangana nabazalwane nodade beBandla LikaNkulunkulu USomandla. Ngabona ukuthi bonke babeqotho kakhulu, kwakungekho ukuzenzisa noma inkohliso emazwini ababewakhuluma, futhi ukuthintana nabo kwanginika umuzwa wenkululeko engangingakaze ngiyzizwe ngaphambilini.
Lapho ngibona abafowethu nodadewethu bezikhandlela uNkulunkulu ngokukhuthala, lapho ngibona ukuzinikela kwabo ekwenzeni imisebenzi yabo nokufuna kwabo ukuphila okunenjongo nami ngezwa ngifisa ukufuna lezi zinto futhi ngiphile ngendlela abantu beqiniso abaphila ngayo njengoba uNkulunkulu efuna. Ngakho, ngaphezu kwemibuthano evamile, nami ngangifuna ukuthola isikhathi sokwenza imisebenzi yami siqu. Kwaba ngalesi sikhathi lapho ibandla langihlelela khona imisebenzi nami. Babefuna ngishayele imoto ukuthatha odadewethu ababili ngibayise endaweni ethile, futhi befuna ngiphinde ngibabuyise ngesonto elilandelayo. Ngesikhathi ngiqala ukunikezwa lo msebenzi, ngawuvuma ngokujabula. Kodwa lapho ngihamba, ngaqala ukucabanga ngokunye ngaze ngezwa ukuzisola okuthile: “Eyi bakithi, usuku okufanele ngithathe ngalo labo dade kufanele kube usuku lwami lokuphumula, futhi ngesonto elizayo kufanele ngiyobalanda futhi. Kuzodingeka ngivuke ekuseni kakhulu ngalezo zinsuku ezimbili. Akukhathaleki ukuthi uhambo lude kangakanani, kodwa into esemqoka ukuthi kulula kakhulu ukuthi loya mgwaqo ugcwale isiminyaminya sezimoto. Kungcono ukuhamba ekuseni ngoba kusuke kunezimoto ezimbalwa, kodwa ngubani ongasho ukuthi ngizobambeka isikhathi esingakanani emgwaqeni lapho sengibuya? Sonke isikhathi sami sizochitheka ngihleli nje emgwaqeni, kusho ukuthi ngeke ngiluthole usuku lwami lokuphumula... ”Lapho umkami engizwa ngikhononda kanje, wahlanganyela nami: “Ukwenza imisebenzi yakho akulula njengalokhu obukucabanga. Ngokuqinisekile kubandakanya ukuba wenze iqiniso. Ukwenza iqiniso ukushiya inyama, futhi kusho ukuthi uzohlupheka ube nobunzima futhi ukhokhe inani. Cabanga ngalokhu, wawuvame ukuzikhipha uyophuza, udle uphinde ufune injabulo, futhi ngisho noma ungazange ube nenjabulo ngemva kosuku olukhathazayo, wawungakhonondi neze. Kodwa manje unikezwe umsebenzi futhi kudingeka uchithe isikhathi sakho kuwona, futhi udinga ukuhamba endleleni enobunzima, kodwa enhliziyweni yakho awufuni ukukwenza lokhu. Lo msebenzi, nakuba ngaphandle kubonakala sengathi uyinto oyihlelelwe ngabafowenu nodadewethu, empeleni awuwenzeli umuntu othize lo msebenzi, kodwa ukugculisa uNkulunkulu futhi ubuyisela uthando lukaNkulunkulu. Lo msebenzi unikezwe wena namuhla, lokhu nguNkulunkulu ekuphakamisa, futhi lolu uthando lukaNkulunkulu lwehlela phezu kwakho. Kufanele ukwazise lokhu. Ungazishiyeli ukuzisola emsebenzini wakho wokuqala.” Ngemva kokusho lokhu, wangifundela ingxenye yezwi likaNkulunkulu: “Yonke into oyenzayo idinga ukuthi ukhokhe inani elithile ngokuzikhandla. Ngaphandle kobunzima bangempela, awukwazi ukwanelisa uNkulunkulu, ayifiki nakancane ekutheni yenelise uNkulunkulu, futhi iyiziqubulo ezingasho lutho nje! Lezi ziqubulo ezingasho lutho zingamanelisa yini uNkulunkulu? Lapho uNkulunkulu noSathane belwa embusweni kamoya, kufanele umenelise kanjani uNkulunkulu, futhi kufanele ume kanjani uqine ebufakazini bakho Kuye? Kufanele wazi ukuthi yonke into eyenzeka kuwe ingukuvivinywa okukhulu futhi yisikhathi lapho uNkulunkulu ekudinga ukuthi ube nobufakazi. Ngaphandle, azibukeki zibalulekile kangako, kodwa lapho lezi zinto zenzeka ziyakhombisa ukuthi uyamthanda yini uNkulunkulu noma cha. Uma umthanda, uyokwazi ukuma ebufakazini bakho Kuye, futhi uma ungalukhombisi uthando Lwakhe, lokhu kukhombisa ukuthi awuyena umuntu owenza iqiniso, ukuthi awuyena ongenalo iqiniso, futhi awunakho ukuphila, nokuthi ungamakhoba! Yonke into eyenzeka kubantu ilapho uNkulunkulu ebadinga ukuthi bame baqine ebufakazini babo Kuye. Ayikho into enkulu eyenzeke kuwe njengamanje, futhi awunabo ubufakazi obukhulu, kodwa yonke imininingwane yempilo yakho yansuku zonke iphathelene nobufakazi bakho kuNkulunkulu” (“Ukuthanda uNkulunkulu kuphela Okuwukukholwa kuNkulunkulu Ngeqiniso” kwethi Izwi Livela Lisenyameni).
Okulandelayo：Ngakwamukela Ukubuya KweNkosi
Ukubusiswa Ngenxa Yokugula—I-Eseyi emayelana noThando lukaNkulunkulu UNkulunkulu uSomandla wangiholela endleleni yokuthola ukuhlanjululwa Ukubaleka “Emphandwini Wengwe” Ukwahlukana Ngokuphelele Nempilo Yakudala